အငြိမ်းစားယူခဲ့သော LEGO များသည်ပင်လျှင် အွန်လိုင်းတွင် အပြီးအပိုင် ရောင်းထွက်သွားသည်။
အငြိမ်းစားယူထားသော LEGO အစုံအလင်သည် အွန်လိုင်းတွင် အပြီးတိုင် ရောင်းထွက်သွားသည်။
10 / 11 / 2021 10 / 11 / 2021 ခရစ် Wharfe 263 Views စာ0မှတ်ချက် 10258 လန်ဒန်ဘတ်စ်ကား, ၁၀၂၆၁ Roller Coaster, 10262 ဂျိမ်းစ်ဘွန်း Aston M ကartDB5 ၌တည်၏, 10264 ထောင့်ဂိုဒေါင်, 10267 Gingerbread အိမ်, 10269 Harley-Davidson ဆီ Boy, 10277 မိကျောင်းစက်ခေါင်း, 75256 Kylo Ren ရဲ့လွန်းသည်, ၇၆၃၈၆ HogwartWhomping မိုးမခ, 76159 Joker ရဲ့ Trike Chase, 76166 Avengers မျှော်စင်စစ်တိုက်, 92177 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော။, Batman, Black ကသောကြာနေ့, Black ကသောကြာနေ့ 2021, Creator Expert, ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့, ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ 2021, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Ideas, Lego, Lego Batman, Lego Creator Expert, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego Ideas, Lego Marvel, Lego Star Wars, Lego VIP တနင်္ဂနွေ, LEGO VIP Weekend ၂၀၂၁, LEGO.com, Marvel, စျေးဝယ်, Star Wars, အဆိုပါ LEGO Group, Zavvi
အငြိမ်းစားယူတာ ပိုတောင်ကောင်းသေးတယ်။ Lego အစုံအပါအဝင် အွန်လိုင်းတွင် အပြီးအပိုင် ရောင်းချရန် စတင်နေပြီဖြစ်သည်။ ၁၀၂၆၁ Roller Coaster နှင့် 92177 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော.
ဒီ set နှစ်ခုစလုံးက စပြီးပါပြီ။ Brick Fanatics'' အငြိမ်းစားထုတ်ကုန်များစာရင်းကို ပုံမှန်မွမ်းမံထားသည်။ လွန်ခဲ့သည့်လအနည်းငယ်အတွက်၊ ဒီဇင်ဘာ 31၊ 2021 တွင် ကောင်းမွန်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ၎င်းသည် ခက်ခဲပြီး မြန်ဆန်သောရက်စွဲတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ သို့သော် အစုံလိုက်များသည် ထိုအချိန်မတိုင်မီကတည်းက စတင်ရောင်းချနိုင်သည့်အခွင့်အရေး အမြဲရှိပါသည်- ယခု startမော်ဒယ်တွေ ပိုများလာမယ်။
10264 ထောင့်ဂိုဒေါင် ဥပမာအားဖြင့် UK နဲ့ US မှာ ပျောက်ကွယ်သွားပါပြီ။ 10258 လန်ဒန်ဘတ်စ်ကား, ၁၀၂၆၁ Roller Coaster, 10262 ဂျိမ်းစ်ဘွန်း Aston M ကartDB5 ၌တည်၏, 10267 Gingerbread အိမ် နှင့် 10277 မိကျောင်းစက်ခေါင်း ယူကေမှာလည်း အကုန်ရောင်းကုန်ပြီ။ တကယ်တော့ အနားယူဖို့ပဲရှိတယ်။ Creator Expert ရေကန်ရဲ့ ဒီဘက်ခြမ်းမှာ အော်ဒါမှာလို့ရပါသေးသည် 10269 Harley-Davidson ဆီ Boy.
ကဲ့သို့သော အခြားအကြောင်းအရာများမှ အစုံများစွာ Star Wars, Ideas, Marvel, ဟယ်ရီပေါ်တာ နှင့် Batman - 75256 Kylo Ren's Shuttle အပါအဝင်လည်း ရောင်းကုန်သွားပြီ၊ 92177 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော, 76166 Avengers မျှော်စင်စစ်တိုက်, ၇၆၃၈၆ HogwartWhomping မိုးမခ နှင့် 76159 Joker's Trike Chase။ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့သည် မည်သည့်အခါမျှ ပြန်မရနိုင်တော့ပေ။ LEGO.comထို့ကြောင့် တရားဝင်ချန်နယ်များမှတစ်ဆင့် ၎င်းတို့ကိုရယူရန် သင့်အခွင့်အရေးကို အခြေခံအားဖြင့် လက်လွတ်သွားပါသည်။
အဲဒီ အတွဲတွေထဲက (ဒါမှမဟုတ် တကယ်ရောင်းထွက်ပြီးသား) တော်တော်များများကို ကိုင်ထားဆဲသူတွေအတွက် သတင်းဆိုးပါပဲ၊ Lego VIP တနင်္ဂနွေ, Black ကသောကြာနေ့ နှင့် ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့. ယခုနှစ်၏အကြီးမားဆုံးစျေးဝယ်ပွဲများအတွက်၎င်းတို့ထဲမှအများအပြားတွင်အဆုံးလိုင်းလျှော့စျေးများကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရန်မျှော်လင့်နေသော်လည်းယခုနှစ်စျေးဝယ်မှုကာလအတွင်းစစ်မှန်သောမက်လုံးများသည်ယခုအခါတွင်အပိုဆု VIP အမှတ်များနှင့်လက်ဆောင်များပါလိမ့်မည်၊ - ဝယ်ယူမှု။
တခြား အငြိမ်းစား ဝတ်စုံတွေကို လက်မလွတ်စေဘဲ သေချာချင်ရင်၊ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ အရာအားလုံး၏ dep စာရင်းအပြည့်အစုံကိုကြည့်ရှုရန်art2021 တွင် စင်ပေါ်၌ ရောက်နေသည် - ထို့နောက် သင်ပိုင်ဆိုင်သည့်အရာများ မပျောက်သေးစေရန် သင့်လက်ချောင်းများကို ဖြတ်လိုက်ပါ။ ရှိရင် တတိယ p ရှိတယ်လေ။arty လက်လီရောင်းချသူများ- 10262 ဂျိမ်းစ်ဘွန်း Aston M ကartDB5 ၌တည်၏ မှာနေဆဲရရှိနိုင်ပါသည် Zavvi, ဥပမာအားဖြင့်။
သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego ငါတို့ကတဆင့် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← LEGO Harry Potter Gryffindor Dorms GWP သည် တရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးသို့ ပြန်လာသည်။
LEGO Chinese New Year 2022 သည် ထွက်ရှိမည့်ရက်စွဲနှင့် ဈေးနှုန်းများကို ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ →